Ugcino lwedatha ye-GMO yoPhando-Uphando lwe-GMO
Tsiba uye kwiheda yokukhangela ekunene
Tsibela kwindawo engezantsi
UkuKhangela okuPhambili kwezinye iiNgxelo
Khangela ezinye iiNgxelo
Inkxaso yeGMO Research
Jonga isayensi ye-GMO kunye nezibulala-zinambuzane ezinxulumene noko, kunye nefuthe lazo kwezempilo, ezolimo nakwimeko-bume
Uvimba weenkcukacha wophando weGMO uqulethe uphononongo kunye nolushicilelo lwejenali olubonisa ubungozi okanye okunokubakho kunye neziphumo ezinobungozi ezivela kwi-GMOs ("ulungelelwaniso lwemfuza," "ubunjineli bemfuza," okanye izinto eziphilayo "ezenzelwe izityalo eziphilayo") kunye nemichiza yokubulala izitshabalalisi kunye nezolimo. Isiseko sedatha senzelwe ukuba sisixhobo kunye nezixhobo zophando kwizenzululwazi, abaphandi, iingcali zonyango, ootitshala kunye noluntu ngokubanzi. Uhlalutyo olunzulu lwezifundo ezithile eziphambili ziya kubonelelwa. Eyokuqala inokufumaneka Apha.
Khangela iijenali ezihlaziyiweyo zontanga, amanqaku, izahluko zeencwadi kunye nomxholo wokufikelela ovulekileyo.
Khangela ezinye iingxelo, ezinjengeengxelo ze-NGO kunye neencwadi, ezingazifezekisiyo iikhrayitheriya zedatha ephambili kodwa zibaluleke ngokulinganayo kwaye kufanelekile.
Ukukhangela iziseko sedatha, faka indlela yakho yokukhangela kwenye yeebar yokukhangela apha ngasentla okanye ucofe kuyo Phendla sentloko. Nceda ujonge kwi Indlela yokukhangela iphepha lolwazi oluthe kratya ekukhangeleni indawo yolwazi.
Iintsomi ze-GMO kunye neNyaniso
Utshintsho lwe-morphological kunye ne-biochemical kwiigundane ezingamadoda zondliwa ngombona oguqulweyo (Ajeeb YG)
Izifundo zamva nje
Ulwakhiwo lwenyani: Iimbali zeBt zomqhaphu eIndiya.
Uxinzelelo lwe-oxidative ye-glyphosate, i-AMPA kunye ne-metabolites ye-pyrethroids kunye ne-chlorpyrifos ye-pesticides phakathi kwabantwana bezikolo zaseprayimari e-Cyprus.
Ubungqina bovuko lwe-chlordecone nge-glyphosate kwi-French West Indies.
Iimpembelelo zokuvezwa kokutya kwizibulali-zinambuzane kwi-faecal microbiome metabolism kumawele amadala.
Iimpembelelo ezinobuthi zeGlyphosate kwiNkqubo yeNervous: Ukuphononongwa okuCwangcisiweyo
Ukuqukuqela kweTransgene: Imicelimngeni yoLondolozo lweFama yombona kwiNgingqi yaseBrazil eyomileyo.
Iimpawu ze-Biochemicals zesimo sokusebenza kwesibindi kwi-serum yegazi yeegundane ezitya i-glyphosate-resistant genetically modified soybean kunye ne-herbicide "Roundup".
Impembelelo ye-glyphosate-resistant genetically modified soy kunye ne-Roundup herbicide kwinqanaba le-metabolites ethile yokutshintshiselana kwe-nitrogen kwiimpuku.
Uphuhliso lwasemva kokubeleka kwenzala yeempuku zabasetyhini kunye nezalathi ze-massometric zamalungu eempuku zezizukulwana ezibini ngokusetyenziswa kweembotyi zesoya eziguqulwe ngokwemfuza kunye ne-Roundup.
I-Metabolism ye-nitrogen compounds kwizizukulwana ezithathu zeegundane phantsi kwefuthe le-glyphosate-resistant genetically modified soy kunye ne-Roundup herbicide.
Iingxelo ze-NGO zamva nje
Imvumelwano kwi-GM Foods kufuneka isekelwe kuPhononongo oluCwangcisiweyo
Uninzi lwezifundo zibonisa uKutya kweGM okudumileyo akuKhusekanga njengeNgxaki eqhelekileyo
Uninzi lwabaqeqeshi bezempilo kunye nabafundi bezempilo bakholelwa ukuba ukutya kwe-GM akukhuselekanga
Uninzi lwamaQela ezeMpilo alubuza ngoKhuseleko lokutya kweGM
Imvumelwano eBaqilima kuKhuseleko lokuTya oluGuquliweyo
Le database inikwe amandla yi IGMO yasimahla eMelika, 501 (c) 3 umdla woluntu ongenzi nzuzo, ngenkxaso evela Isayensi yeGMOS kwaye Ukubukela. Ngelixa kungekho mrhumo ngokusebenzisa le database, Iminikelo Ziyabulelwa ukunceda ukuhlawula iindleko zolondolozo oluqhubekayo kunye nohlaziyo. Iminikelo itsalwa kwirhafu ukuya kuthi ga ngokuvunyelweyo ngumthetho.
Ilungelo lokushicilela © 2022 · Uphando lweGMO · Onke amalungelo agciniwe
Sukuthengisa iinkcukacha zam .